Manchester United oo aad uga sara martay kolka ay timaado dhaqaalaha laga helo maalgalinta funaanadaha ay ku dheelaan Barcelona iyo Real Madrid – Gool FM
Manchester United oo aad uga sara martay kolka ay timaado dhaqaalaha laga helo maalgalinta funaanadaha ay ku dheelaan Barcelona iyo Real Madrid
Kaafi July 22, 2016
(Catalonia) 22 Luulyo 2016. Iyada oo ay kooxaha reer Spain ay awooda kubadda cagta ee Europe haysteen sanadihii dambe, waxaa muuqata in dhinaca dhaqaalaha ay aad uga sareyso Manchester United oo maalgalinta funaanadeeda ku heshia laba jibaar inta ka soo gasha Barcelona iyo Real Madrid.
England kooxaha ka dhisan waxa ay aad uga dhaqaale badan yihiin kooxaha kale marka ay timaado kubadda cagta, United, Chelsea, Arsenal iyo Manchester City dhamaan waxa ay buuxiyeen afarta sare marka ay timaado dhaqaalaha maalgalinta funaanadaha.
Hada ciyaaryahanada ugu magaca weyn kubadda cagta waxa ay joogaan Spain balse isbadal ayaa iman kara madaama uu madaxweynaha Barcelona, Josep Maria Bartomeu, uu qiray in Premier League yahay horyaalka ugu caansan aduunka.
“Premier League waa kan ugu wanaagsan marka ay timaado danaha taageereyaasha,” ayuu u sheegay BBC.
“Xifaaliyeyaasheena ugu weyn waa Premier League, ama Real Madrid maxaa yeelay Premier League waxa ay sameeyaan arinimo danaha qof walba u siman yahay.”
Iyaga oo hada dib ula heshiiyey Qatar Airways,, Barcelona waxa ay heli doontaa €33.5 million sanadkii waxa ayna ku jirtaa booska toddobaaad marka ay timaado dhaqaalaha laga helo maalgalinta maaliyada, waxa ay boos ka horreysaa Real laakiin waxa ay ka dambeysaa Liverpool iyo Bayern Munich.
SEMI-FINAL: Banaadir VS Jubbaland oo galabta isku qaban doona garoonka Koonis afar dhammaadka tartanka maamul goboleedyada Soomaaliya
Cristiano Ronaldo oo waqtiga la dagaalaya si uu taam ugu noqdo European Supercup laakiin….